Otu esi etinye Slack na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa - LinuxCapable
Otu esi etinye Slack na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa
October 19, 2021 June 27, 2021 by Jọshụa James
Usoro 1. Wụnye Slack Iji aka na .DEB
Usoro 2. Wụnye Slack site na ngwugwu Snap
slack bụ otu n'ime usoro nzikọrịta ozi mmekọrịta kacha ewu ewu n'ụwa. Site na mmalite mmalite ya na 2013, ọ toro. A na-akwado ya ugbu a n'etiti ndị otu mmepe na ụlọ ọrụ iji jikọta ọtụtụ ọrụ, ndị na-agba ọsọ, nzukọ, wdg. Slackzọ Slack si arụ ọrụ bụ ịmepụta ọwa maka otu gị, isiokwu, ndị ahịa, ma ọ bụ ndị ọrụ gị. Slack na-egosipụtakwa oku olu na vidiyo, nkesa faịlụ.
N'ime ntuziaka na-esonụ, ị ga-ama ka esi etinye usoro nkwurịta okwu Slack, malite ya, ma wepụ ya na desktọpụ Ubuntu 20.04 gị.
OS akwadoro: Ubuntu 20.04.
Site na ndabara, Slack adịghị na ebe nchekwa Ubuntu, yabụ ị ga-ebudata ngwugwu .deb maka Slack site na ịga na Slack. ibe nbudata.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike nweta nọmba ụdị kachasị ọhụrụ wee jiri wget iwu budata ngwugwu Slack .deb kama.
Ugbu a, jiri iwu na-esonụ iji wụnye Slack nke ịbudatara.
sudo apt install ./slack-desktop-4.20.0-amd64.deb
Kwenye nrụnye nke Slack site n'ịkwado ụdị nrụpụta ahụ.
Enwere ike itinye Slack site na ngwungwu snap arụnyere na Ubuntu na ndabara ọ gwụla ma i wepụrụ ya. Nke a adịghị ewu ewu dị ka ụzọ ndị ọzọ. N'agbanyeghị nke ahụ, maka ndị ọrụ na-eji Snaps ma ọ bụ nwere mmasị iji ha na Ubuntu, ị nwere ike iji ihe ndị a iji wụnye Slack na desktọpụ gị.
Mbụ, wụnye snapd na sistemụ arụmọrụ Ubuntu gị ma ọ bụrụ na ewepụla ya.
Tupu ị wụnye Slack, ị ga-eme ka ọ rụọ ọrụ classic snap nkwado site na ịmepụta symlink.
Na-esote, tinye iwu snap a ka ịwụnye onye ahịa Slack:
Maka ọdịnihu, iji melite Slack na ngwungwu ọ bụla nke Snap arụnyere, mee iwu a:
Ọ bụrụ na ịchọghị ka etinye Slack, wepụ ya site na iji iwu wepụ Snap.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ịwụnye Slack na Ubuntu 20.04 site na iji ụzọ abụọ dị iche iche. Ụzọ ntuziaka nwere ike ịdị mma ma na-echefukarị maka mmelite, na Ubuntu, Snap abụghị nke a ma ama mana ọ ga-enye gị ụdị kachasị ọhụrụ n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa na mmelite.
Maka ozi ndị ọzọ, ị nwere ike nyochaa wee mụtakwuo maka Slack site na ịga na ibe akwukwo.
Categories Ubuntu Tags slack, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Otu esi etinye Tor Browser na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye ma kwalite ndị ọkwọ ụgbọ ala Nvidia na Ubuntu 20.04